Nezvedu - Shenzhen MENOBeauty Technology Co, Ltd.
Shenzhen MenoBeauty Technology Co, Ltd, yakavambwa muna1997, ndiyo yekutanga bhizimusi resaenzi uye tekinoroji bhizinesi rinotarisana nekutsvaga, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweepamusoro epamusoro Aesthetic & Medical zvishandiso.
Iine zvinopfuura zviitiko zvekuvandudza zvemakore makumi maviri, fekitori yedu inokwanisa ne ISO13485 uye ikozvino ine anopfuura makumi mashanu epasirese tekinoroji tekinoroji uye zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira, zvishandiso zvese zvinokudzwa kuhwina CE, ROHS nezvimwe.
Isu tinoshandira kumusika wepasi rese nemakumi emhando yepamusoro zvigadzirwa zvemuchina kana musika weChinese uchiri mubhu, uchigadzirisa chikamu chepamusika chepamusoro uye vatengi vakasiyana veOEM, ODM nemamwe marangi pasi rese.
MENO pamwechete nevekunze uye epasirese ane chiremera ekushambadzira matekiniki akadai seChina Hairdressing Runako Association, Tsvagiridzo Institute yeTsinghua University muSenzhen, JMB, BASF, nezvimwewo, zvakadzama kudzidza hunyanzvi hwetekinoroji uye kutsvagisa kwekurapa kwekurapa uye nharo gore rega rega.
Meno akaongorora uye akaburitsa mitsara gumi nembiri HIFU uye vaginal hifu patent tech muna 2014 uye kusvika parizvino vakapa yakawanda OEM & ODM masevhisi emakambani mazhinji epamba nekunze.
MENO tarisa kutsvagiridzo uye ibudise yepamusoro tech kupokana kukwegura, muviri slimming Aesthetic & Medical chishandiso kusanganisira HIFU nhevedzano, Radio frequency nhevedzano, Vacuum Cavitaion akateedzana.
MENO, haimboteveri asi gara uchifambira mberi!
MENO anotarisira nemoyo wose kuenda pamwe newe uye kuita ramangwana rakajeka!